Blog - Ndụmọdụ maka etu esi ahọta Onye Nduzi Igwe Kwesịrị Ekwesị maka Azụmaahịa gị
Top Manufacturer Of Mini Printer Kemgbe 2010
4 Inch usoro
Usoro Ntughari Igwe Igwe
Ndụmọdụ maka otu esi ahọta Igwe Igwe Igwe Kwesịrị Ekwesị maka azụmaahịa gị
WPLB80 80mm Kwes Label P ...
WP-Q3C 58mm ngwa nbipute
N'oge a, a na-eji ndị na-ebi akwụkwọ ọkụ na-agbasawanye ebe niile, na-enwekwa ọtụtụ ọrụ. Ya mere, nke na-ebi ọkụ ọkụ dị mma maka gị?
E nwere ọtụtụ ụdị na ọrụ dị iche iche nke ndị na-ebi akwụkwọ na ahịa maka ịhọpụta, ụfọdụ maka akwụkwọ nnata, ụfọdụ maka akwụkwọ nbipụta, ụfọdụ maka iji ekwentị. Dịka ihe dị iche iche a chọrọ, anyị ga-egosi ụdị atọ nke ndị na-ebi akwụkwọ ọkụ na isiokwu a.
>Nnata na ngwa nbipute. N'ime ndị ọzọ, a na-atụ aro ụdị WP200 anyị mgbe ịchọrọ iji ya na ụlọ ọrụ isi nri. Ma anyị nwere anọ ebi akwụkwọ gbapụrụ ọsọ na ụdị a maka oke, 200mm / s, 230mm / s, 260mm / s na 300mm / s. Ọzọkwa, Ọ na-akwado ọrụ nke kwụ n'ahịrị ma na-ezere ịtụ ịtụ efu.
>Label na ngwa nbipute. WP-300B bụ ọrụ nke ndị na-ebi akwụkwọ n'ihi ntụgharị igwe abụọ. Oke kachasị nbipụta bụ 152mm / s. Ọ nwere ọtụtụ ihe mmetụta, akara ojii, oghere nkwụsị na ihe ọdịiche. Na mgbakwunye, ọ na-akwadokwa ihe njide na mpempe akwụkwọ mpụga, nke mere na ọ bụ ezigbo ewu ewu na ụlọ ahịa na ngwa ngwa.
> Abụọ ndị e webatara na mbụ bụ desktọọpụ desktọọpụ, n'okpuru otu bụ a ngwa nbipute mobileWP-Q3A. Nke a bụ nnata & labelụ ngwa nbipute, na-azọpụta ike ọrụ. Na ọ na-akwado NV logo ebi akwụkwọ na otutu 1D & 2D koodu obibi. Ya mere eji ya ebe niile na ụlọ akụ, ụlọ ọgwụ, lọtrị egwuregwu na mpaghara ndị ọzọ.
Na Winpal anyị na-arụ ọrụ kwa ụbọchị iji nwee ike ịmepụta ihe na ịnye ngwaahịa kachasị mma na ndị na-ebi akwụkwọ nke zuru oke chọrọ ihe ndị ahịa anyị chọrọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu ihe niile anyị nwere ike ịnye, egbula oge ịkpọtụrụ anyị.
Post oge: Jul-30-2021
Wifi Receipt Printer, Nnata Mobile Printer, Onye na-ahụ maka nnata ihe ntanye 80mm, Nnata Printer, 80mm Kwesie Nnata Printer, Onye na-ebipụta ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa,
Copyright - 2010-2021: GuangZhou Winprt Technology Co., Ltd. Ikike niile echekwabara.